maruuzen | | Ihlaziywe 18/06/2021 00:15 | Italia
Ukuba iyaphuma Ukuthenga eSicily, zilungiselele ukonwabela ukukhwela uye ekhaya, eyakho okanye eyakho, izipho ezingalibalekiyo. Olo hlobo lweenkumbulo ekufuneka ujonge kuzo, ukunuka okanye ukungcamla zisise kwangoko kolo hambo lokudlula kumazwe ase-Itali.
Yintoni esinokuyithenga eSicily? Izinto ezininzi, ezinye zezokhenketho kwaye ezinye zililize. Kwinqaku lethu namhlanje uya kufumanisa ukuba zeziphi iinkumbulo ezilungileyo kunye nezikhumbuzo ezintle onokuzisa kwesi siqithi sase-Italiya sinomtsalane kwaye sibakhenkethi.
1 Ukuthenga phi eSicily
2 Yintoni onokuyithenga eSicily
Ukuthenga phi eSicily
Izinto zokuqala kuqala: uya kufumana iivenkile ezininzi zabakhenkethi kunye nezikhumbuzo ezininzi eziveliswe ngokukodwa kubakhenkethi. Ungazithenga, kodwa ukuba ungomnye wabo bafuna into ekhethekileyo okanye uhlala enesona sipho silungileyo kwabo basilindeleyo ekhaya, ke kufuneka uhambe ngaphezulu kancinci.
Ewe kuya kuxhomekeka kwindlela olungelelaniswe ngayo nohambo okanye ukuba uhamba wedwa okanye kwiqela okanye kukhenketho. Kodwa, kangangoko kunokwenzeka, kuya kufuneka phuma kumkhondo wabakhenkethi ukufumana eyona. Ngoku, singaqala phi ukuthenga? Yikholwe okanye hayi, kwiivenkile ezinkulu nakwiivenkile zezaphulelo.
Kulungile, nangona ukuba yivenkile enkulu yevenkile kukho ezininzi imveliso yasekhaya kwaye, umzekelo, iwayini ezigqwesileyo ezivela kubavelisi abakhulu. Kukho into elungileyo Carrefour embindini wePalermo othengisa iwayini elungileyo kakhulu kunye nezinto eziqhelekileyo zokuhombisa. Vula I-Lidl, Trapani, efanayo. Ngaba uyayithanda i-pistachio cream? Ke le ivela eLidl inkulu kwaye inexabiso elihle.
Ngaphandle kwevenkile ezinkulu okanye iivenkile ezibalulekileyo unokuthatha ukhenketho lwe ifidi, i zokugcina kunye nezincinci apho ungathenga khona nantoni na ukusuka kwindlu yangasese ukuya kumgubo wokuhlamba impahla. Ngaphandle kwale, inyani yile amanye amagcisa asekuhlaleni abeka izinto zawo apha hayi kwiivenkile ezinkulu. Ndithetha ngeesoseji, iisosi, ijem.
Enye indawo elungileyo yokuthenga yentengiso okanye kwimarike yendawo. Leyo yaseSirakuse intle, inkulu kakhulu. Kuninzi kakhulu ukuthenga umzuzu, intlanzi okanye i-shellfish, njengoshizi, amantongomane kunye neziqholo. Kuthengiswa nexabiso eliphantsi. Inkqubo ye- Iivenkile, enjalo.
Kukho iivenkile kuzo zonke iidolophu ezinkulu kwaye ezinye zivulekile yonke imihla kwaye ezinye kube kanye ngeveki. Kwiidolophu ezincinci iimarike zihlala zilungelelaniswa kube kanye okanye kabini ngeveki. Ukwazi xa kufuneka uye kwiofisi yabakhenkethi ubuze.
Las Iwayini lolunye ukhetho okanye olufanayo, Iwayini. Ungathatha ukhenketho kwizidiliya kwaye uthenge iibhotile apho, ngokuqinisekileyo ezingabizi kakhulu kunakwindawo zewayini. Ukongeza, kwimveliso yeewayini baya kukufundisa ngcono malunga newayini kwaye awuzukuthenga ngenxa yokuba intle kangakanani ibhotile. Kodwa ukuba awukwazi ukwenza ezi hambo zama ukuthenga kwiivenkile ezincinci, ezingezizo zokhenketho. Nditsho nokundwendwela ivenkile enkulu, njengoko besesitshilo ngasentla.
Yintoni onokuyithenga eSicily
Isikhumbuzo esihle kwaye siluncedo kakhulu kukuthenga ibhasikithi yokuthenga, eyenziwe ngezandla, edumileyo kwaye entle ibhokisi. Zihonjiswe ngemibala emininzi kunye neepompo, izipili njalo njalo, kwaye zininzi iindlela. Olunye uthengiso olunokubakho zezi iimveliso zelitye zelava.
Khumbula ukuba eSicily zimbini iintaba-mlilo ezisebenzayo, iNtaba i-Etna ekufutshane nesixeko saseCatania kunye nenye encinci eStromboli. Inyani yile yokuba uninzi lwezitrato zaseSicily zenziwe ngamatye amakhulu entaba-mlilo kwaye kukho nezinye izakhiwo, nalapho ilitye lentaba-mlilo ekubunjweni kwezitena lisetyenzisiweyo. Ke, kukho iimveliso ezininzi ezenziwe ngeli litye lingwevu, ukusuka izacholo, izitya zokuhombisa, iimbiza ...
Ngaba uyayithanda ikorale? Iyafumaneka apha izinto zekorale: ukusuka kumacici kunye nezacholo zomqala, ezilula okanye ezicace gca, ukuya kwizinto zokuhombisa. Umbala wekorale yipinki encinci okanye ibomvu kakhulu, kwaye ukuba ukhangela eyona intle uya kuyifumana eTrapani.
La ICaltagirone yodongwe kumnandi. ICaltagirone yenye yeelali ezisibhozo ezikhuselwe yi-UNESCO, eVal de Noto. I-baroque kakhulu kwaye i-Sicilian kakhulu ngaxeshanye, kwaye izinto zobumbi ziyamangalisa: izitya, iiglasi, iipleyiti, ii-urns, iitreyi ...
Uyayithanda ifayile ye- oonopopi? Iholo yemidlalo yoonopopi yaseSicilian iyaziwa, i-Opera dei Pupi ibisebenza ukusukela kwinkulungwane ye-XNUMX kwaye iyamangalisa. Bobabini iCatania kunye nePalermo banesiko elikhulu kwaye lomelele kule ntsimi. Inkqubo ye- Oonodoli baseCatania Zikhulu kunezo zisePalermo, kodwa kwezi zixeko zombini uya kufumana iivenkile ezininzi ngesithembiso esinomdla kakhulu. Kuninzi oonopopi abenziwe ngesandla intle kwaye kukho amaxabiso amaninzi.
Ukuba uza kunxiba iminqwazi, ngoku ukushuka kungaphantsi kwaye kungaphantsi kwimfashini, ungathenga umnqwazi oqhelekileyo weCoppola. Ukuba yayihlala inxulumene ne-mafia, namhlanje ibali lahlukile kwaye baninzi abantu abancinci abakhethe ukunxiba lo mnqwazi. hayi hayi, Utat'omkhulu. Bazalwe njengeminqwazi eyenziwe ngesandla ePalermo, yoboya obuluqilili, kodwa kukho iinguqulelo ezipholileyo, zehlobo, ezenziwe ngomqhaphu.
I-Itali ayinakuba yi-Italiya ngaphandle kwepasta elungileyo, ke ukhetho lokuthenga luhle kakhulu thenga ipasta eyomileyo elula ukuhambisa kunye nokunika njengezipho. Kukho uphawu oluhle kakhulu, Inkululeko yasimahlaa, Evela ngqo kwimimandla ekhululwe kulawulo lweefiyaas kuluntu lwasekhaya.
Kwicandelo elidlulileyo ebesithetha ngalo thenga iwayini kwiiwayini okanye iiwayini ezincinci. Kufanelekile, makwazeke ukuba iSicily ibisenza iwayini ukusukela nge-1500 BC ngenxa yoko ibinexesha lokuzigqibezela kwaye inike ezona zilungileyo.
Zili-23 iindawo ezivelisa iwayini kwesi siqithi, kodwa ezona ntlobo zaziwayo zine ISyrah kunye neMarsala. Okona kuncinci kwaziwayo kodwa mhlawumbi yiyo loo nto isipho esilungileyo si UNero d'Avola kunye U-Etna Rosso. Kukho abavelisi abakhulu abanjengoTasca d'Amanita okanye abancinci, njengeCOS, eyenza iwayini yendalo kunye neye organic.
Kwaye leliphi iqabane elingcono lewayini kune iqhekeza yetshokholethi? Ayinamsebenzi ukuba uya eSicily phakathi ehlotyeni. Kukho isitayile esithile setshokholethi ayinyibiliki: el Uhlobo lukaMonica kuthengiswa kwimivalo. Ineengcambu zeAztec, ezivela phesheya kolwandle, kwaye zenziwe ngeembotyi zecocoa kunye noshukela, konke kuguqulwe kwaba kukuncamathisela kwaye enongwe okanye enesitrasi, okanye nesinamon okanye nekofu. Zisongelwe ngephepha elincinci kakhulu kunye nenkwenkwe, unesipho esihle kakhulu.
Ekugqibeleni, eSicily zininzi iivenkile zetikiti, izinto ezininzi nge-marzipan, kodwa zithatha uhlobo lweelamuni, iitsheri kunye namapere. Imalunga nabadumileyo Iziqhamo zaseMartorana, imifanekiso eqingqiweyo eyinyani, kangangokuba ibukeka ngathi ziziqhamo zokwenene Kwaye abenzi iziqhamo kuphela kodwa kunye neesandwich ezibonakala njengeyona nto yokwenyani. Zonke zisongelwe ngefinesse, njengeetshokholethi.
Ungandixeleli nantoni na, ngoku ufuna ukuya kutyelela iSicily.
I dolophuIinqwelo zokuthengaIingcebiso
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Ukuthenga eSicily
Inkcubeko kunye nenkcubeko yokwakha yasePopayán